France inoisa Mauritius parunyorwa rwayo rutsva rwe 'ruvara rutsvuku'
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mauritius Breaking Nhau » France inoisa Mauritius parunyorwa rwayo rutsva rwe 'ruvara rutsvuku'
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Mauritius Breaking Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Indasitiri yezvekushanya yeMauritius inobvuma chisarudzo chehurumende yeFrance chekuisa Mauritius parudungwe rutsva rwe“ruvara rutsvuku” kwenguva pfupi, pamwe chete nedzimwe nyika pfumbamwe muSouthern Africa.
Mauritius 'Public and Private Tourism Sector Committee yakapa chirevo chinotevera nhasi:
Indasitiri yekushanya yeMauritius inobvuma danho rehurumende yeFrance rekuisa Morishiyasi parudungwe rwavo rutsva “rutsvuku” pahwaro hwechinguvana, pamwe chete nedzimwe nyika pfumbamwe dzirimo Southern Africa.
Sarudzo iyi inouya panguva isingafadzi kuboka rekushanya reMauritius, mwedzi miviri mushure mekuvhurwa kwemiganhu yedu kune vashanyi vanobaiwa majekiseni. France iri imwe yemisika yedu mikuru, tiri kuyera mabatiro achaita sarudzo iyi panguva iyo kubhuka kwekupera kwegore kwainyanya kuvimbisa.
Kunyangwe chiziviso chehurumende yeFrance, Morishiyasi inoramba iri nzvimbo yakavhurika uye ticharamba tichigamuchira vashanyi vanoshuvira kuwana kana kuwana patsva chitsuwa chedu, tichitevedzera zvirevo zvehutano zviripo parizvino. Vafambisi vekushanya vacharamba vachiita zvese zvavanogona kuti vaone kuchengetedzeka kwevashandi vavo nevashanyi.
Vakuru venzvimbo varikusangana nevakuru veFrance vakakodzera. Pamusoro pezvo, vamiriri vekomiti yakabatana yeruzhinji/yakavanzika yekushanya vakatokumbira musangano wepamutemo nemumiriri weFrance, Her Excellency Florence Caussé-Tissier. Misangano yepamutemo nevamwe vamiriri vezvematongerwo enyika ichatevera.
Sechiyeuchidzo, kukosha kweHurumende ye Morishiyasi kwagara kuri kuchengetedza hutano hwevaMauritius, vagari uye vashanyi kuchitsuwa. Mukupindura kuwanikwa kweiyo Omicron musiyano Mauritius yakamisa kubatana kwemhepo nenyika dzinoverengeka.
Mauritius yakanyatso chengetedzwa kubva kunze kwenyika kweCOVID-19. Zvirongwa zvedu zvehutano hweveruzhinji zvinoonekwa zvakanyanya seyakanyanya-kuita, uye isu tine mwero wekudzivirira wakanyanya, unopfuura 89 muzana yehuwandu hwevanhu vakuru vakatobaiwa. Vashandi vekushanya vakaiswa pamberi pakubaiwa, izvo zvinoreva kuti vashanyi vanogamuchirwa uye kuitirwa basa chete nevashandi vakabaiwa.
Bazi rezvekushanyirwa kwenyika riri kuramba richitsigira chirongwa chekubaya vanhu nhomba, icho chawedzerwa nguva pfupi yadarika pakaiswa vechidiki vari pasi pemakore gumi nemasere, pamwe nekuparura chirongwa chechitatu chekuwedzera nhomba, icho chakatobatsira vanhu vanodarika zviuru zana vekuMauritius.
Mhuri yekushanya yeMauritius inoramba yakabatana mukutarisana nedambudziko idzva iri. Tinodaidzira kuhurumende yeFrance kuti iongorore sarudzo iyi nekukasira kuderedza kukanganiswa kweindasitiri inotsamira vanhu vanopfuura zviuru zana nemakumi mashanu, uye iri kungodzokera patsoka dzayo.